Madaxweyne Trump ayaa heshiiskii sanadkii 1994 lagu aasaasay ururka ganacsiga adduunka ee WTO ku tilmaamay heshiis ganacsi kii ugu xumaa taariikhda, waxa uuna ku hanjabay in dalkiisa uu isaga bixi doono ururkaasi.
Tiro ka mid ah Ciidamada Gaarka ee Mareykanka oo Soomaaliya loo diray
Mareykanka ayaa ciidamo kooban u diray Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, si ay tababar u siiyaan Ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM.
Dowladda Mareykanka ayaa Kenya kaga digtay suura galnimada weeraro Al-shabaab qorsheynayaan inay ka geystaan gudaha dalka Kenya, sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay Mareykanka.
Daawo Sawiradda:Habka ay u socoto Doorasha Dalka Mareykanka.
Dadweynaha Mareykanka ayaa maanta u dareeray goobaha cod-bixinta, si ay u doortaan Madaxweynaha cusub ee dalka hoggaaminaya afarta sano ee soo socota.
Xawaaladaha Soomaalida ee Mareykanka oo dib loo furayo
Xawaaladaha Soomaalida ee dalka Mareykanka ayaa maalinta berri oo Taariikhdu tahay 1-da bisha Maarso dib loo furi doonaa, kadib markii horaantii bishan ay xirmeen.
Mareykanka oo duqeyn cirka ah ka fuliyay deegaan u dhow degmada Saakow
Mareykanka ayaa sheegay in weerar cirka ah oo loo adeegsaday diyaarado uu ka fuliyay gudaha Soomaaliya, gaar ahaan deegaan ku dhow degmada Saakow ee Gobolka Jubada Dhexe.
Mareykanka oo walaac ka muujiyay xiisada siyaasadeed ee ka jirta Soomaaliya
Dowladda Mareykanka ayaa walaac ka muujiyay xiisada siyaasadeed ee ka jirta Soomaaliya, kadib qoraal ka soo baxay Wasaarada Arrimaha Dibada Mareykanka oo looga hadlay xaalada siyaasadeed iyo khilaafka u dhaxeeya Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha.
Mareykanka oo markale sheegay in Dhalinyaro Soamlia ah oo Dalkiisa ka tagay ay ku Biireen Dagaalka Siiriya
Mareykanka oo ka qeyb-qaadanaya tayaynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay labo jibbaari doonto kaalinteeda ku aaddan tayaynta iyo dhisidda ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya.
Askari Mareykan ah oo Saldhig ku yaal Gobolka Texas ku dilay tiro askar ah
Toogasho ayaa ka dhacday Saldhiga Fort Hood ee Gobolka Texas, halkaasoo saldhig ciidan ku leeyihiin Ciidamo Mareykan ah, iyadoo isla xeradan sanadkii 2009-kii ay ka dhacday toogasho ceynkan oo kale ah.
Mareykanka oo Kenya ka Caawinaya Sugidda Amniga Soohdinta Soomaaliya
Xukuumadda Washington ayaa Kenya ka caawinaysa sugidda amniga soohdinta ay la leedahay Somalia, kaddib codsi ka yimid madaxwaynaha Kenya, Uhuru Kenyatta iyo safiirka Maraykanka ee Kenya Robert Godec.
Mareykanka oo Qiray inay Ciidammo ka joogaan gudaha Soomaaliya
Saraakiil Mareykan ah oo u wareysiyo siiyay wargeyska Washitgong Post ayaa sheegay in ciidammo Mareykan ah ay ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya, waana markii ugu horreysay oo Mareykanku uu sheego inay ciidammo kaga sugan yihiin Soomaaliya.
Barack Obama ayaa difaacay go,aankii ay Ciidanka Mareykanka ku weerareen Baraawe
M/weynaha wadanka Maraykanka Barack Obama oo shir jaraa’id oo uu ku difaacayay weeraradii ciidamada Maraykanku dhawaan ka fuliyay dalalka Soomaaliya iyo Libya ayaa waxaa uu sheegay in dawladiisu ay si gaar ah indhaha ugu heynayso ururada iyo shaqsiyaadka Al-Qacida xiriirka la leh ee Africa ku sugan .
Mareykanka ayaa sheegtay in uu lahaa musuuliyada weerarkii shalay ka dhacay Baraawe
Ciidamada Kumandoska Mareykanka ee sida gaarka ah u tababaray Navy Seal ayaa qaaday howl galkii habeen hore ka dhacay degmada Baraawe, ee Sh/Hoose kaasoo bartilmaameedkiisa ahaa guri uu degenaa sarkaal ka tirsan Al-Qaacida oo la shaqeeya Shabaab.